Maalinta: Febraayo 6, 2019
Sahin waxay leedahay mashruuca Metro
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Sahin, 31 Maarso doorashooyinka maxalliga ah, ayaa sheegay inay sameyn doonaan haddii la doorto. Ahin wuxuu ku dhawaaqay bayaankii doorashada wuxuuna yidhi, etmek In la sii wado oo laga dhigo magaalada Antep magaalo ku habboon xusuusta awoowayaasheen iyo shahiiday. [More ...]
Diyaarinta Mashruucyada Codsiga ee Ankara Izmir YHT Line si Mount Mount
Diyaarinta mashruucyada codsiyada ee isku xirka qadka Ankara İzmir YHT Line ee Saldhigga Afyon. Adeegga Iibsiga ee Maamulka Gobollada [More ...]
RayHaber Ingriis badan ma sii jirto!
RayHaberMarka hore Turkiga: Websaydhka websaydhka wararka warshadaha ee wershadaha RayHaber 9. oo u dabaaldegaya da'da saxeexida siyaasad kale adoo u rogaya 65 kun oo wararka Ingiriisiga ah goobta aqristayaashayada qiimaha badan [More ...]
Shirkii Ganacsiga Dadweynaha ayaa lagu qabtay DHMI
Kulan loogu talagalay horumarinta iskaashiga ka dhexeeya hay'adaha iyo ka soo qaybgalka maareeyayaasha shirkadaha ganacsiga dadweynaha ayaa lagu qabtay Xarunta Kongareeska ee DHMİ. Maamuleyaal ganacsato dowladeed badan ayaa kulanka ka soo qeybgalay. Maareeyaha Guud ee Shirkadda Korantada Korontada (EÜAŞ) iyo Shirkadaha Dowladda ee Turkiga [More ...]
Halkalı-Ku xiro Tareenka si loo sameeyo qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadda isku xiraysa Yurubta Aasiya
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, "Turkiga iyo Midowga Yurub (EU) ee la sameeyo nidaam gaadiid oo shaqeynaya waa in danaha labada dhinac si degdeg ah oo ammaan ah. Maanta wadashaqaynteena [More ...]
Xoghayaha Guud ee Dawlada Hoose ee Magaaladda metela iyo Samulaş A.Ş. Kuxigeenka gudoomiyaha gudiga agaasimayaasha Coşkun Öncel ayaa macasalaameyn la sameeyay shaqaalaha Samulaş. [More ...]
Tababarka loogu talagalay Ardayda Tababarka ee TÜVASAŞ
Loogu talagalay Jaamacadda, ardayda Dugsiga Sare ee Mihnadaha iyo Dugsiga Sare ee iyagu ku tababaranaya tababar xirfadeed oo xirfadeed ah oo ku saabsan Agaasinka Guud ee TÜVASAŞ; Agaasinka Degmooyinka ee Siyaasadaha Qoyska iyo Bulshada ee tababarayaasha; Farsamooyinka Isgaarsiinta, Maareynta Walbahaarka, [More ...]
Alstom's Electric Transport Solution APTİS ayaa lagu baaray Spain
Alstom wuxuu soo bandhigayaa Aptis, khibrad cusub oo gaadiid ah oo ku saabsan carwo lix isbuuc ah oo ka dhacda Spain. Aptis waxaa si wada jir ah loo tijaabin doonaa shirkadaha wadooyinka ee Barcelona, ​​Madrid iyo Vigo. Tijaabada ugu horreysa ee hawlgal bishii Janaayo [More ...]
Madaxda warshadaha Energy iyo fiilooyinka isgaarsiinta caalamka oo hawlgallada Prysmian Group ee dalka Turkiga ee Turkish Prysmian ku Cable, tareenka soo xal bixiyey nidaamka. Türk Prysmian Kablo wuxuu bilaabay inuu soo saaro 1990 [More ...]
Furitaanka Taariikhda Seerpark-Beachyolu Tram Line
1 Agoosto 2017 wuxuu ku jiray adeegga shacabka Kocaeli. marxalad ayaa la gaadhay. Wadista imtixaanka waxaa dhowaan sameeyay 2. Markii masraxa la geliyay wuu cadaaday. 2 ee Febraayo [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipal 24 June 2018 doorashooyinka, xitaa kahor intaan qandaraaska aan wali la dhigin calaamadda tareenka dhulka hoostiisa ee Gebze-Darica ayaa loo tolay xarunta degmada oo ahayd mowduuca dooda. Degmadu hadda waxay la mid tahay tareenka Izmit-Alikahya, oo aan wali la dhisin. [More ...]
Hay'adda ATSO U Daawo U Qayb-Q
Antalya Beyaz Kay-Sür-Yüz ”Ururka Isboortiga Jiilaalka oo ay soo qaban qaabisay Antalya Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (ATSO) ayaa la qaban doonaa Febraayo. Antalya “Kay-Sür-Yüz” Ururka Isboortiga Jiilaalka oo ka socda Caddaan ilaa Cirka waxaa soo abaabulay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Antalya [More ...]
Tareenka Korantada Hydrogen waxaa lagu aqoonsadaa lix Waddan oo Germany ah
Alstom's Coradia iLint ayaa dalxiis ku ah Jarmalka laga bilaabo dhammaadka Janaayo ilaa badhtamaha Febraayo 2019. Tareenka unugyada gaaska ee tamarta ayaa ah kii ugu horreeyay noociisa ee adduunka. Alstom waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda hydrogen-ka ee diyaar u ah lix gobol oo federaal ah iyo [More ...]